ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အျမန္ဝန္, Bangkok, Bangkok (2022)
HEIN NAUNG HTUT ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အျမန္ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း
ခုလက်ရှိ နာမည်စကြီးလာတဲ့ ငွေညစ်နည်းတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့~ သောကြာနေ့ထိ မလာနိုင်သူများအတွက် သီးသန့် လက်ခံထားပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်။
💁🏻‍♂️လိုင်စင်လုပ်မယ်ဆို မိတိဆွေတို့ ကိုယ်တိုင်လာရမှာဖြစ်သလို၊ လာလုပ်ချိန်မှာလည်း passport or ပန်းရောင်ကဒ်ကို မဖြစ်မနေယူခဲ့ရပါမယ်။
💁🏻‍♂️Bangkok နှင့် အနီးဝန်းကျငိ ခရိုင်များအတွင်း ကားနဲ့လာကြိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညအိပ်ရမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် တည်းခိုရမည့်နေရာပါ စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
🙄အစားအသောက်ကို အရင်လိုမကျွေးနိုင်ပေမယ့် လိုင်စင်ကဒ်ကိုတော့ အရင်တုန်းကထက်ပိုပြီး မြန်သထက် မြန်အောင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။
💳ကဒ်ရပြီးသူများလည်း မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ညီကို၊ သူငယ်ချင်းများကို ကြေငှာပေးပါဦးဗျာ ❤️
လာရောက်အားပေးကြသော မိတ်ဆွေ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို အထူပင်ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ 🙏🙏🙏
အသေးစိတ် ဆက်သွယ်လိုပါက 📞 0634431144ကို ဆက်သွယ်န်ုင်ပါသည်။
ကျွန်တော် ကိုဟိန်းနောင်ထွဠ်တွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်
ပွဲစားကိုသာ ဖုန်းဆက်ကြပါလို့ 🙏🙏🙏
လိုင်စင်အသစ်ရသွားကြတဲ့ ညီအကိုတွေကော၊ သက်တန်းတိုးအတွက် အမြဲအားပေးကြတဲ့ ညီအကိုတွေကော အရမ်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်🙏🙏🙏
👉Visa သက်တန်းရှိတဲ့ Passport
👉ပန်းရောင်ကဒ် သက်တန်းကျန်ရှိရုံတင် ဆိုက်ကယ်လိုင်စင်၊ ကားလိုင်စင် နဲ့ ၆ဘီးကား၊ ကားကြီးလိုင်စင်များကိုအမြန်ဆုံး ကဒ်လာလုပ်လို့ရပါပြီ✨✨✨
💁🏻‍♂️ကိုယ်တိုင်ပဲလာမလား... 🏢လာကြိုရမလား စိတ်ကြိုက်သာ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ လာကြိုရမယ်ဆို ကျွန်တော်တို့ လာကြိုလို့ရမယ့် နေရာလေးကို ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပေးပါဗျ 🚗🚙
💁🏻‍♂️စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အလုပ်ပိတ်ရက်မှာ လာမလား.... 😊
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အလုပ်နားရက်လေးကို ရွေးချယ်ပြီး #အမြန်ဆုံး လိုင်စင်ကဒ်လုပ်လိုက်ကြတော့ဗျာ....
အသေးစိတ်ကို chat box or 📞ဖုန်း - 0634431144 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
အမြန်နဲ့ ဘယ်မှာရမလဲဆို- #one_stop_services_driving_license သာလာခဲ့ဗျာ။
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လာရောက်အားပေးကြသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကို အထူးပင်ကျေးဇူးတငိရှိပါသည်။🙏🙏🙏
မနက်ဖြန်အတွက် စရင်းတင်ချင်သူများလဲ chat box or 0634431144ကနေ ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။✨✨✨
😱 တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရက်က်ိုရွေးချယ်ပြီး အမြန်လာရောက် သက်တန်းတိုးနိုင်လို့ရပါပြီ☺️
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ်အသစ်များ လျောက်ထားလိုပါက တနင်္လာနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ 7ရက်ပတ်လုံး မည့်သူ့ရက်ကိုမဆို ကြိုက်နှစ်သက်ရာရက်ကို ရွေး၍ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လာရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
🔥မှတ်ချက်- ကျွန်​တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုမှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ် အမြန်ရရှိပါကြောင်း…🔥🔥😱😱
✅ကားကြီးဖြစ်သည့် ၆ဘီး, 10ဘီးများက်ိုလည်း စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အမြန်လိုင်စင်ကဒ်များဝင်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။
📞0634431144 or Chat boxမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
🌟#Happy_Saturday_And_Sunday မှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အမြန်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်....🤩🤩
-စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေ 2ရက်ဘဲ လိုင်စင်အသစ်လုပ်လို့ရတာဆို 🙅‍♀️မဟုတ်ဘူးနော် . Happy Saturday and Sunday ဟာ ရုံးပိတ်သူတွေအတွက် အဓိက လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ အမြန်ဆုံး ကဒ်ကိုလည်း ပြန်ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်လို့...
💁🏻‍♀️ကျွန်တော်တို့ #One_Stop_Services_Driving_License ကိုရောက်တာနဲ့ 💳ကဒ်ရပြီလို့တာ မှတ်လိုက်နော်🔥
⚙️10ဘီးကားများလည်း လိုင်စင်အသစ် လုပ်လို့ရပြီနော်။
မိတ်ဆွေ... ကျွန်တော်တို့ #One_Stop_Seevies_Driving_Licenseမှာ လာလုပ်မယ်ဆို အဓိက သက်တန်းမကုန်တဲ့ Passport နဲ့ ပန်းရောင်ကဒ်ရှိရင်ရပြီဗျ။ 6ရက်နေ့အတွက် လိုင်စင်အသစ်လုပ်ချင်သူကို သီးသန့်လက်ခံထားတာဖြစ်တာကြောင့် လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဗျ။
⏱အချိန်ကတော့ 2ရက်အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အသွားအပြန် အကြိုအပို့ပါ စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။
🛖Bangkokမဟုတ်တဲ့ အခြားနယ်က လူများလာလုပ်မယ်ဆို Bangkokအထိရောက်တာနဲ့ လာကြို ညအိပ်ပါ စီစဉ်ပေးလို့ အလွယ်တကူလိုင်စင်လာလုပိရုံပါပဲဗျာ။
လိုင်စင်အသစ် စရင်းပေးမယ်ဆို 📞0634431144ကို ဆက်သွယ်ပြီး
-ဖုန်းနံပါတ် နှင့် လာမည့်ရက်ကို စရင်းပေးသွင်းန်ိုင်ပါတယ်။
💁🏻‍♂️လိုင်စင်သက်တန်းတိုးလုပ်ချင်သူများ chat boxမှာ တစ်ဆင့်အလွယ်တကူစရင်းပေးနိုင်ပါသည်။
(❗️‼️ ရုံးမှ ရက်ချိန်းကို အချိန်ပေးလာနိုင်သူမှသာ လက်ခံပေးပါသည်။❗️)
🎉#Happy_New_Year_2022 🎉ကြိုဆိုရင်း ပိတ်ရက်မရှိ လိုင်စင်များကို အတူတူ လုပ်လိုက်ကြပါစို့ 🌟✨💥
"ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရံုးမ်ားဖြင့္ေပးၿပီ"
ယာဥ္ေမာင္းေလ်ာက္ရာတြင္ ပတ္စပို႔စာအုပ္အနီ (သိုမဟုတ္) ပန္းေရာင္ကဒ္ ရွိေနရံုျဖင့္ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းပိတ္ရက္
မရွိယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အထူးဝန္ေဆာင္မူကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ #DRIVINGLICENSEONESTOPSERVICE တြင္
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လာေလ်ာက္ရာမွ လိုင္စင္ကဒ္ရသည္အထိ ဝန္ေဆာင္မူမ်ားေပးေနၿပီမို႔ 🧑‍💻
ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္ျဖစ္ေစ၊ ကားလိုင္စင္ျဖစ္ေစ၊ ကားႀကီးယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ျဖစ္ေစ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေလ်ာက္ခ်င္သည္ဆိုပါက ဖုန္း0634431144 (သိုမဟုတ္) ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေပ့စ္💬💬💬💬ကေနၿပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါ
ပီမိုင္ပိတ္ရက္မ်ားလည္း မပိတ္ဘူးေနာ္🥰🥰 🥰
🇹🇭ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း Company၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများရှိ မိတ်ဆွေများကို ဦးစားပေးပြီး ပီမိုင်အတွင်း လိုင်စင်အသစ်ကို လက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
💁🏻‍♂️ပီမိုင်အတွငိးလုပ်ထားတော့ 🙄အလုပ်အတွက်လဲ စိတ်မပူရဘူး။ ပြီးမှ ကဒ်ထုတ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ 😉😉
💁🏻‍♂️အဝေးကလာမယ့်သူအတွက်လဲ ညအိပ်စီစဉ်ပေးထားပြီး၊ အသွားအပြန်ပါ စီစဉ်ထားပေးတယ်နော်။
ပီမိုင်အတွငိးတော့ လူဦးရေးကိုလည်း ကန့်သတ်ထားပေးတာကြောင့် အရင်လုပ်တဲ့သူ အမြန်ရမယ်နော်🔥
အမြန်စရင်းသွင်းမယ်ဆို 📞 ဖုန်း - 0634431144ကို ဆက်သွယိပြီး နာမည် စရင်းပေးထားလိုက်နော်။
စရင်းပေးရာတွင် passport or ပန်းရောင်ကဒ်ထဲက နာမည်ကိုပဲ ပြောပြပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။
🙏မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေ ဖြစ်ပါစေ 🙏
Driving License ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့အတွက် ဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေ အရေးလဲကြီးတယ်။ ကား၊ ဆိုင်ကယ်ရှိပြီး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိရင် မိတ်ဆွေတို့ လမ်းခရီးသွားရလည်း ခက်ခဲမယ်။
ပြီးဆော့ အလုပ်ခွင်မှာဆိုလည်း ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လေးတစ်ခုမရှိတာနဲ့ ကိုယ်ရရှိမယ့် အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကားလိုင်စင်ဖြစ်ဖြစ် ကြိုလုပ်ထားဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
💁🏻‍♂️မိတ်ဆွေသာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များကို ကျွန်တော်တို့ #Driving_License_One_Stop_Servies မှာ လာလုပ်မယ်ဆို အမြန်ဆုံးရရှိမှာဖြစ်ပြီး။ လိုအပ်သော အချက်အလက်များကိုလဲ မိတ်ဆွေတို့ကို ပြောပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ #One_Stop_Services ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေလုပ်ပေးရမှာက သက်တမ်းမကုန်သေးတဲ့ Passport နဲ့ Work Permitကို chat box မှတစ်ဆင့်ပို့ပေးပြီး 💁🏻‍♂️0634431144ကို ဆက်သွယ်စရင်းသွင်းလိုက်ပါ။
#Servicesအနေနဲ့ အကြိုအပို့ နဲ့ ညအိပ်ပါ စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်လို့ မိတ်ဆွေတို့ လာဖို့ဝေးတဲ့ သူအတွက်လဲ အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယိ ❤️
🔥ယနေ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လာလုပ်ကြသူများနှင့် ကဒ်ထုတ်သူများရဲ့ အမှတ်တရပံုရိပ်များ......
ဒီလို 💳ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် ကားလိုင်စင်များကို အမြန်ရချင်ရင်တော့ ကျွန်တော်တ်ို့ရဲ့ #Driving_License_One_Stop_Services ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဗျာ 🔥🔥🔥
လိုင်စင်လုပ်မယ်၊ သက်တန်းတိုးမယ်ဆို 0634431144 ကို ဆက်သွယ် ပြီး အမြန်ဆံုး စရင်းပေးသွင်းလိုက်​ေ တာ့ဗျာ။
“နှစ်သစ်ကူး ရက်များလည်း ဖွင့်ပေးပါပြီ”
ဝန်ဆောင်မူကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို ရုံးပိတ်ရက်မရှိဘဲ
✅ နယ်ဝေးမှ ဘန်ကောက်ကိုလိုင်စင်လုပ်ချင်သူများ
✅ ပိတ်ရက်နေ့လေးမှာ လိုင်စင်လာလျောက်လိုသူများ
ပတ်စပို့စာအုပ် / ပန်းရောင်အလုပ်သမားကဒ်
ဆက်သွယ်ရန် ph 0634431144
🗒ဒီလအတွင်း လိုင်စင်အသစ်လုပ်ချင်သူများအတွက် ပီမိုင်အတွင်း လက်ခံတော့မယ်နော်...
ရုံးပိတ်ရက်ရှိသူများ၊ ပီမိုင်အတွင်း လိုင်စင်လုပ်ချင်သူများကို အမြန်ဆုံး လိုင်စင်လုပ်ပေးမှာဖြစိပြီး ကဒ်ထုတ်ဖို့အတွက် ရက်ချိန်းကို သီးသန့်စီစဉ်ပေးမှာဖြစိပါတယ်။
💠လိုင်စင်လုပ်ရင် ဘာလိုမလဲဆိုရင် သက်တန်းမကုန်သေးတဲ့ Passport or ပန်းရောင်ကဒ် လိုပါမယ်။
💁🏻‍♂️မိတ်ဆွေတို့ ညအိပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတော့ ယူလာဖို့ အကြံပြုပါတယ် 🙏
🎉ပီမိုင်အတွင်း လုပ်မယ်ဆို ဒီနေ့ကစပြီး
နာမည်၊ ဖုန်း၊ လိပ်စာအတိအကျလေး ကို 0634431144 ကို ဆကိသွယ် စရင်းသွငိးလို့ရပါပြီ။
🚙 နယ်ဝေးလို့ အသွားအပြန်ကိစ္စဆိုလဲ စိတ်မပူနဲ့နော် လာလဲကြိုပေးသလို၊ လိုက်လဲပြန်ပို့ပေးတယ်နောိ 😉
22/12/2021 ေန႔ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကဒ္ ထုတ္ယူၿပီးေသာေရာင္းရင္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည္🤗
လိုင္စင္ကဒ္မရေသးသည့္ သူေတြ ျမန္ျမန္ဖုန္းဆက္လာၾကပါဦးးးးးးဗ်ိဳံံံ့..........🔈🔈🔈🔔🔔🔔
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကဒ္ကို ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္ခင္ အျမန္ထုတ္ေပးခ်င္လို႔ပါဗ် 😻
1/10/2021(OCT) လမွစၿပီး ယေန႔ 22/12/2021 ေန႔အထိ လိုင္စင္လာေလ်ာက္ထားသူမ်ား
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကဒ္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါၿပီးးးးး ျဖစ္ေၾကာင္းးးးးးး
ေရာင္းရင္းႀကီးမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္ ဗ်ားးးးးး
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း-0634431144 (သို႔)မက္ေဆ့စ္💬💬💬💬 ကေနၿပီးလဲဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါ ဗ်ားးးး
ကျွန်တော်တို့နှင့်လိုင်စင်လာလုပ်ပြီး လိုင်စင်ကဒ်မရသေးသောသူများ အမြန်ဆက်သွယ်လာကြနော်🔥🔥
ယုံကြည်စွာ နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဝန်ဆောင်မူကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ ကိုကို မမ တို့
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လျောက်ဖို့ရန် စိတ်ဝင်စားပါက
ဖုန်း - 0634431144 (သို့မဟုတ်) ကျွန်တော်တို့၏ ပေ့စ်
💁🏻‍♂️မိတ်ဆွေက ဆိုင်ကယ် ၊ ကား လိုင်စင်လဲ လုပ်မယ်၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းက သက်တန်းတိုးမယ်ဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံးသာ လာလုပ်ကြတော့နော်။
🎫ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်၊ ကားလိုင်စင် အတွက် 2ရက်သာ အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး သက်တန်းတိုးများအတွက်တော့ 1ရက်သာ အချိနိပေး
မှာဖြစ်တာကြောင့် မိတ်ဆွေတို့လဲ အချိန်မကုန်တော့သလို လိုင်စင်မရ မှာလဲ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့
🔹ပထမဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ဘန်ကောက်နှင့် အနီးဝန်းကျင် ခရိုင်များရှိ ဘယ်မြို့နယ်များမဆို လာကြိုပေးသည့်အပြင်...
🔹တစ်ညအိပ် နှစ်ရက်အတွက်လည်း စီစဉ်ပေးတယ်။
🔹စာရွက်စာတန်းကအစ မိတ်ဆွေတို့အလုပ်မရှုပ်အောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်။
💁🏻‍♂️ပြီးတော့ လိုင်စင်လုပ်ပြီးရက်ချိန်း ရပြီဆိုတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ဖုန်းဆကိအကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်လို့ မိတ်ဆွေများ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းလေးကို စောင့်ပေးရုံပါပဲဗျာ🙏
မိတ်ဆွေတို့ လာလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ စိတ်ရှုပ်စရာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိပဲ အပြီးထိ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်လို့ စောစောလာသူက စောစောရက်ချိန်းရ စောစော လိုင်စင်ကဒ် ထုတ်ရုံပါပဲဗျာ
📞ဆကိသွယ်ရန် 0634431144 .
အကောက်အတုကို Report တုပေးကြပါဦး😡😡
အကောက်အတု အောင့်မှာလင့်ချပေးမယ် https://www.facebook.com/profile.php?id=100054302630335
ကျွန်တော့်ပုံတွေကို သုံးပြီး ပိုက်ဆံတွေ လိမ်စားတော့
မည် ။ အဲ့အကောက်ကို ဝိုင်းပြီး Report တုပေးကြပါ😡
Driving License One Stop Services
รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အျမန္ဝန္ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา
လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ရမှ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေမဲ့ သူတွေအတွက် Video လေးလာပါပြီ
Hein Haung Htoot driving license services
#စနေနေ့နဲ့_တနင်္ဂနွေနေ့မှာ_လိုင်စင်အသစ်_လုပ်ချင်သူများ_လက်ခံပေးနေပါပြီ။ ................... တနင်္လာနေ့~ သောကြာနေ့ထိ မလာနိုင်သူများအတွက် သီးသန့် လက်ခံထားပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ 💁🏻‍♂️လိုင်စင်လုပ်မယ်ဆို မိတိဆွေတို့ ကိုယ်တိုင်လာရမှာဖြစ်သလို၊ လာလုပ်ချိန်မှာလည်း passport or ပန်းရောင်ကဒ်ကို မဖြစ်မနေယူခဲ့ရပါမယ်။ 💁🏻‍♂️Bangkok နှင့် အနီးဝန်းကျငိ ခရိုင်များအတွင်း ကားနဲ့လာကြိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညအိပ်ရမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် တည်းခိုရမည့်နေရာပါ စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 🙄အစားအသောက်ကို အရင်လိုမကျွေးနိုင်ပေမယ့် လိုင်စင်ကဒ်ကိုတော့ အရင်တုန်းကထက်ပိုပြီး မြန်သထက် မြန်အောင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။ 💳ကဒ်ရပြီးသူများလည်း မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ညီကို၊ သူငယ်ချင်းများကို ကြေငှာပေးပါဦးဗျာ ❤️ လာရောက်အားပေးကြသော မိတ်ဆွေ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို အထူပင်ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ 🙏🙏🙏 အသေးစိတ် ဆက်သွယ်လိုပါက 📞 0634431144ကို ဆက်သွယ်န်ုင်ပါသည်။
ကျွန်တော် ကိုဟိန်းနောင်ထွဠ်တွင် ယာဉ်မောင်းလိုင် စင် ဝန်ဆောင်မူပေးနေသည့်တစ်ခြားညီကိုတွေမရှိ ပါ။ ထို့အတွက် တစ်ခြားပွဲစားများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး လိုင်စင်လုပ်ခဲ့သည်ဆိုပါက ဆက်သွယ်ထားခဲ့သော ပွဲစားကိုသာ ဖုန်းဆက်ကြပါလို့ 🙏🙏🙏
#ပိတ်ရက်မရှိ_လိုင်စင်အသစ်များ_လုပ်ကြမယ်🔥 …………….. လိုင်စင်အသစ်ရသွားကြတဲ့ ညီအကိုတွေကော၊ သက်တန်းတိုးအတွက် အမြဲအားပေးကြတဲ့ ညီအကိုတွေကော အရမ်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်🙏🙏🙏 💁🏻‍♂️စိတ်ချစေရမယ်၊ မြန်လဲမြန်စေရမယ်ဗျာ😉 💳လိုင်စင်ကဒ်လုပ်မယ်ဆိုရင် 👉Visa သက်တန်းရှိတဲ့ Passport 👉ပန်းရောင်ကဒ် သက်တန်းကျန်ရှိရုံတင် ဆိုက်ကယ်လိုင်စင်၊ ကားလိုင်စင် နဲ့ ၆ဘီးကား၊ ကားကြီးလိုင်စင်များကိုအမြန်ဆုံး ကဒ်လာလုပ်လို့ရပါပြီ✨✨✨ 💁🏻‍♂️ကိုယ်တိုင်ပဲလာမလား... 🏢လာကြိုရမလား စိတ်ကြိုက်သာ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ လာကြိုရမယ်ဆို ကျွန်တော်တို့ လာကြိုလို့ရမယ့် နေရာလေးကို ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပေးပါဗျ 🚗🚙 💁🏻‍♂️စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အလုပ်ပိတ်ရက်မှာ လာမလား.... 😊 မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အလုပ်နားရက်လေးကို ရွေးချယ်ပြီး #အမြန်ဆုံး လိုင်စင်ကဒ်လုပ်လိုက်ကြတော့ဗျာ.... အသေးစိတ်ကို chat box or 📞ဖုန်း - 0634431144 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
💳လိုင်စင်အသစ်တွေ လုပ်ကြဦးမယ်ဗျာ.... 💳သက်တန်းတွေ တိုးကြဦးမယ်ဗျာ.... အမြန်နဲ့ ဘယ်မှာရမလဲဆို- #one_stop_services_driving_license သာလာခဲ့ဗျာ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လာရောက်အားပေးကြသော မိတ်ဆွေတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကို အထူးပင်ကျေးဇူးတငိရှိပါသည်။🙏🙏🙏 မနက်ဖြန်အတွက် စရင်းတင်ချင်သူများလဲ chat box or 0634431144ကနေ ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။✨✨✨
#Driving_License_One_Stop_Servicesမှ_နေ့စဉ်_ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ်များ_ထုတ်ယူပေးနေပါပြီ🔥 …………. 😱 တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရက်က်ိုရွေးချယ်ပြီး အမြန်လာရောက် သက်တန်းတိုးနိုင်လို့ရပါပြီ☺️ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ်အသစ်များ လျောက်ထားလိုပါက တနင်္လာနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ 7ရက်ပတ်လုံး မည့်သူ့ရက်ကိုမဆို ကြိုက်နှစ်သက်ရာရက်ကို ရွေး၍ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လာရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။ 🔥မှတ်ချက်- ကျွန်​တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုမှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဒ် အမြန်ရရှိပါကြောင်း…🔥🔥😱😱 ✅ဆိုင်ကယ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ✅ကားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် ✅ကားကြီးဖြစ်သည့် ၆ဘီး, 10ဘီးများက်ိုလည်း စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အမြန်လိုင်စင်ကဒ်များဝင်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက 📞0634431144 or Chat boxမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
🌟#Happy_Saturday_And_Sunday မှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အမြန်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်....🤩🤩 -စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေ 2ရက်ဘဲ လိုင်စင်အသစ်လုပ်လို့ရတာဆို 🙅‍♀️မဟုတ်ဘူးနော် . Happy Saturday and Sunday ဟာ ရုံးပိတ်သူတွေအတွက် အဓိက လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ အမြန်ဆုံး ကဒ်ကိုလည်း ပြန်ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်လို့... 💁🏻‍♀️ကျွန်တော်တို့ #One_Stop_Services_Driving_License ကိုရောက်တာနဲ့ 💳ကဒ်ရပြီလို့တာ မှတ်လိုက်နော်🔥 💥ဆိုင်ကယ်ပဲ လိုင်စင်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနောိ ⚙️ ဆိုက်ကယ် ⚙️ကား ⚙️6ဘီးကား ⚙️10ဘီးကားများလည်း လိုင်စင်အသစ် လုပ်လို့ရပြီနော်။ မနက်ဖြန်အတွက် စရင်းတင်မယ်ဆို 📞0634431144 ကိုဆက်သွယ်လိုက်နောိ
#6ရက်နေ့_လိုင်စင်အသစ်_လုပ်ချင်သူများအတွက်...💳 မိတ်ဆွေ... ကျွန်တော်တို့ #One_Stop_Seevies_Driving_Licenseမှာ လာလုပ်မယ်ဆို အဓိက သက်တန်းမကုန်တဲ့ Passport နဲ့ ပန်းရောင်ကဒ်ရှိရင်ရပြီဗျ။ 6ရက်နေ့အတွက် လိုင်စင်အသစ်လုပ်ချင်သူကို သီးသန့်လက်ခံထားတာဖြစ်တာကြောင့် လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဗျ။ ⏱အချိန်ကတော့ 2ရက်အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အသွားအပြန် အကြိုအပို့ပါ စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။ 🛖Bangkokမဟုတ်တဲ့ အခြားနယ်က လူများလာလုပ်မယ်ဆို Bangkokအထိရောက်တာနဲ့ လာကြို ညအိပ်ပါ စီစဉ်ပေးလို့ အလွယ်တကူလိုင်စင်လာလုပိရုံပါပဲဗျာ။ လိုင်စင်အသစ် စရင်းပေးမယ်ဆို 📞0634431144ကို ဆက်သွယ်ပြီး -Passport နာမည်။ -နေရပ်လိပ်စာ -ဖုန်းနံပါတ် နှင့် လာမည့်ရက်ကို စရင်းပေးသွင်းန်ိုင်ပါတယ်။ 💁🏻‍♂️လိုင်စင်သက်တန်းတိုးလုပ်ချင်သူများ chat boxမှာ တစ်ဆင့်အလွယ်တကူစရင်းပေးနိုင်ပါသည်။ (❗️‼️ ရုံးမှ ရက်ချိန်းကို အချိန်ပေးလာနိုင်သူမှသာ လက်ခံပေးပါသည်။❗️)
"ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေရႊျမန္မာမ်ားအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရံုးမ်ားဖြင့္ေပးၿပီ" ႏွစ္သစ္ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ကားယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီဗ်ာ🤗 ယာဥ္ေမာင္းေလ်ာက္ရာတြင္ ပတ္စပို႔စာအုပ္အနီ (သိုမဟုတ္) ပန္းေရာင္ကဒ္ ရွိေနရံုျဖင့္ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းပိတ္ရက္ မရွိယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အထူးဝန္ေဆာင္မူကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ #DRIVINGLICENSEONESTOPSERVICE တြင္ ဝန္ေဆာင္မူမ်ားေပးေနပါၿပီ 💁‍♂️ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လာေလ်ာက္ရာမွ လိုင္စင္ကဒ္ရသည္အထိ ဝန္ေဆာင္မူမ်ားေပးေနၿပီမို႔ 🧑‍💻 ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္ျဖစ္ေစ၊ ကားလိုင္စင္ျဖစ္ေစ၊ ကားႀကီးယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ျဖစ္ေစ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေလ်ာက္ခ်င္သည္ဆိုပါက ဖုန္း0634431144 (သိုမဟုတ္) ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေပ့စ္💬💬💬💬ကေနၿပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါ ၿပီ☺️☺️ ပီမိုင္ပိတ္ရက္မ်ားလည္း မပိတ္ဘူးေနာ္🥰🥰 🥰